Rubber Products Vulcanizing tank - China Qingdao Otu ebe Machinery
Product Ngwa Rubber ngwaahịa vulcanizing tank na-bụ-eji maka mmezi nke roba ngwaahịa vulcanization. The roba ngwaahịa nwere ike ịbụ roba cable, roba akpụkpọ ụkwụ, roba sooks, roba ala, nrapado teepu, roba belt, roba mmiri igbochi, roba bọl, roba lining, ochie taya retread, agbapụtawo roba desulphurization na SBR thermoplastic resin; mgbochi-corrosion, mgbochi deformation impregnation ọgwụgwọ, nri na omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ na-ewepụ (egbu) bacteria, yarn, aji, SoC ...
Rubber ngwaahịa vulcanizing tank na-bụ-eji maka mmezi nke roba ngwaahịa vulcanization. The roba ngwaahịa nwere ike ịbụ roba cable, roba akpụkpọ ụkwụ, roba sooks, roba ala, nrapado teepu, roba belt, roba mmiri igbochi, roba bọl, roba lining, ochie taya retread, agbapụtawo roba desulphurization na SBR thermoplastic resin; mgbochi-corrosion, mgbochi deformation impregnation ọgwụgwọ, nri na omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ na-ewepụ (egbu) bacteria, yarn, aji, sọks okpomọkụ stereotypes, chụọ àjà n'akuku na ọkpụkpụ elu-mgbali mgbanwe, degreasing, hydrolysis nke dị iche iche feathers, aluminum ngwaahịa ọxịdashọn. -Eji carbon ihe, Asbestos esemokwu ihe, gypsum na ya na ngwaahịa, na ihe ndị ọzọ autoclave, nri, na-azọnye, ihicha. The akụkụ nke abụọ nke imewe echiche nke roba tube vulcanizing tank. 1, The roba vulcanizer ọdịdị mmadụ! (N'ebe nile nka, na-atụgharị uche ndị na-abara imewe) 2, obi iru ala! (Dabere na: GB150-2011 "mgbali arịa n'ichepụta ụkpụrụ", ISO9001: 2008 quality asambodo usoro, HACCP nri nchekwa asambodo imewe, rụpụta) 3, The roba vulcanizer bụ a pụrụ ịdabere na! (Nhọrọ nke ụwa a ma ama ika akụkụ,) 4, The roba vulcanizer bụ ike ịzọpụta! (Okpomọkụ ọnwụ, ọkụ eletrik, abịakọrọ ikuku, oge oriri nke anọ ezi uche, na njikarịcha) 5, Rubber Vulcanizer bụ mara mma ile anya, akwụkwọ, na kọmpat, mfe! The atọ akụkụ nke roba tube vulcanizing tank imewe, n'ichepụta ihe ndabere Products na echesinụ dị na "ikike ụkpụrụ" na GB150-98, GB151-98 mba ọkọlọtọ n'ichepụta nabata, akwụkwọ ikike ọmụma na teknuzu akwụkwọ ike n'ezi ihe.
Nka na ụzụ kwa nke roba tube vulcanizing tank.
n'ịgwọ tank n'obosara / tube ogologo / zuru ike 1500 mm / 3000mm / 5.3m3
Design mgbali 1.0Mpa
The kacha arụ ọrụ nrụgide bụ 0.8Mpa
The kacha ọrụ okpomọkụ nke 180 ℃
Total arụnyere ike nke banyere 64KW
Power ọkọnọ voltaji 380V
ite ahụ ihe onwunwe Q345
Wall ọkpụrụkpụ nke tank ahụ 12mm
arọ nke banyere 3 tọn
Nkebi nke 6 na-agwọ tank ancillary ụlọ ọrụ (ọrụ na onye-nwe)
Air Compressor ume e kupụrụ ekupụ: 0.6m3 / min
Nkebi nke 7: njirimara vulcanization tank
◆ eletriki akpaka akara ,
◆ electronic, n'ibu abụọ n'elu-voltaji nchebe.
◆ n'ibu nchekwa yinye.
◆ electronic okpomọkụ ndiiche mgbazi.
◆ electronic n'elu-okpomọkụ akpaka nchebe.
◆ okpomọkụ anomaly mkpu.
◆ eletriki kọntaktị mgbali akara
◆ akpaka uzuoku hama silencer.
◆ okpomọkụ dị iche n'etiti ihe ndị ite (okpomọkụ nkesa) ± 0,5 ℃.
◆ Intelligent okpomọkụ akara, okpomọkụ akara ziri ezi n'ime ± 0,5 ℃.
Rubber ngwaahịa, dị ka roba, vulcanization, agbapụtawo roba desulfurization, SBR thermoplastic plastic; achara carbonization degreasing, roba, roba, roba, roba, Wood ọkụ, nla, mgbochi corrosion, mgbochi deformation impregnation, nri na proprietary Chinese na nkà mmụta ọgwụ anya (egbu) bacteria.
Previous: Igwe anaghị agba nchara Food Industrial Nri ite
Osote: Wood osisi Anticorrosive Ọgwụgwọ tank
autoclave igwe roba bụla.-ulo
roba autoclave vulcanizer
roba bụla. autoclave
roba bụla. nwere ike
roba sooks bụla. arịa
roba vulcanization autoclave
roba vulcanizing nwere ike
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri Ịsa nhazi Machin ...